ekhaya / Bible / YeVangeli kaMateyu / ch 3 Matthew
3:1 Ke kaloku ngaloo mihla, UYohane umbhaptizi wafika, eshumayela entlango yelakwaJuda,
3:2 esithi: "Phendukani. Kuba ubukumkani bamazulu busondele. "
3:3 Kuba lo nguye awayethetha yena ngomprofeti uIsaya, bathi: "A Izwi lodandulukayo entlango,: Yilungiseni indlela yeNkosi. Wutyenenezeni umendo wayo. "
3:4 Ke uYohane lowo ingubo eyenziwe ngoboya zeenkamela, , enombhinqo wentlonze esinqeni sakhe. Kwaye ke ukudla kwakhe kuziinkumbi nobusi basendle.
3:5 kuhlala ke phakathi kweYerusalem, lonke elakwaYuda, kunye nommandla lonke wonke waseYordan waphuma waya kuye.
3:6 Babhaptizwa nguye eYordan apho, bevuma izono zabo.
3:7 ke, akubona into eninzi yabaFarisi nabaSadusi ukufika ekubhaptizeni kwakhe, Wathi yena kubo: "Nenzalo yamarhamba, ngubani na owanibonisayo, ukuba niyibaleke ingqumbo ezayo?
3:8 ngoko ke, uvelise iziqhamo eziyifaneleyo inguquko.
3:9 Kwaye musa ukhetha nithi ngaphakathi kwenu, 'Thina sinobawo uAbraham ubawo wethu.' Kuba ndithi kuni, ukuba uThixo unamandla kuwo la matye ukumvelisela abantwana uAbraham kula matye.
3:10 Kuba ngoku izembe sele sifakiwe kwi engcanjini yemithi. ngoko ke, wonke umthi ongavelisi siqhamo sihle uya kugawulwa uze uphoswe emlilweni.
3:11 Kanjalo, Mna okunene ndinibhaptiza ngamanzi languquko, kodwa ngubani na oya kuza emva kwam unamandla kunam,. Kodwa mna andifanele ukuthwala izihlangu zakhe. Yena uya kunibhaptiza ngomlilo loMoya oyiNgcwele.
3:12 yokwela fan yakhe esandleni sakhe. Yaye ngocoselelo Ndobahlambulula isanda sakhe. Kwaye uya ayibuthele kuvimba ingqolowa yakhe kuvimba. Ke wona umququ uya kuwutshisa ngomlilo ongacimekiyo. "
3:14 But John refused him, bathi, “I ought to be baptized by you, and yet you come to me?"
3:15 nokuphendula, UYesu wathi kuye: “Permit this for now. For in this way it is fitting for us to fulfill all justice.” Then he allowed him.
3:16 ke uYesu, having been baptized, ascended from the water immediately, khangela, the heavens were opened to him. And he saw the Spirit of God descending like a dove, and alighting on him.
3:17 kwaye qaphelani, there was a voice from heaven, bathi: "Lo nguNyana wam oyintanda, in whom I am well pleased.”